Burmese taste - Iora: တမ်းတရတဲ့ရွှေချဉ်ပေါင်
Posted by Iora at 12:48 AM
Aunty Oo August 16, 2013 at 2:13 AM
မီးမီးငယ် August 16, 2013 at 6:07 AM
ကိုယ်ခုတလောလုပ်ရင် ပုဇွန်ခြောက်ကုန်နေလို့ ၊
တမ်းတခြင်းများစွာနဲ့:P
San Htun August 16, 2013 at 6:44 AM
စန်းထွန်းလည်း ငါးပိမထည့်ဘူး ငံပြာရည်နဲ့ ကြော်တယ်...ဆူနမ်တို့ နားက Global Food မှာ ချဉ်ပေါင်ရလို့့ သွားတိုင်းဝယ်..ကန်တက်ကီမှာ ချဉ်ပေါင်ငတ်ခဲ့သမျှ မေရီလန်းရောက်မှ အဝတီးနေတယ်...း) အိန္ဒိယ၊ မက်ဆီကန်တွေလည်း ချဉ်ပေါင်ကြိုက်တယ်နော်...မမအိုင်အိုရာ ဟင်းအစပ်အဟပ်လေးတွေက ကောင်းလိုက်တာ..လိုက် ချက်စားဦးမယ်..း)
Iora August 16, 2013 at 7:35 AM
ဟုတ်တယ်နော်။ ၀ယ်စားလုို့ ရရင်လည်းသိပ်မသန့် ဘူးလေ။
ကုိုယ်လည်းချဉ်ပေါင်စားချင်နေတယ်။ အင်ဒီးယန်းဆုိုင်ကလည်းလှမ်းသေးတယ်။ ကုိုယ်တုို့စန်းထွန်းစီသွားမှထင်တယ်။ သူ့ စီမှာချဉ်ပေါင်တွေပေါတယ်တဲ့။ ဟိ..
အဲလိုမိုးတွေရွာနေတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာ ချဉ်ပေါင်ကိုမျှစ်နဲ့ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးအုပ်၊ နံနံတုို့ရှမ်းနံနံတို့ အုပ်ထားတဲ့ဟင်းနံ့ လေးမွှေးနေတတ်တာ သတိရမိတယ်။ ခုရေးရင်းတောင်ရလာသလိုဘဲ။ အမေကသားသမီးတွေအားလုံးအကြိုက်ညီတဲ့ ၀က်သားနဲ့အာလူးဟင်းဆီပြန်လေးတွဲချက်ထားတတ်တယ်။ ငါးပိရည်ကတော့ဇလုံတုို့အုိုးခပ်လတ်လတ်တို့ နဲ့ ကုိုယ်ဖျော်သလိုစတုိုင်မျိုးအများကြီးဖျော်ပြီး တုို့စရာတွေမြိုင်နေအောင်ပြင်ပေးထားတတ်တယ်။ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့်အစားငါးမီးအုံးပြီးလည်းထဲ့တတ်တယ်။ အဲဒါမိုးနံ့ နဲ့ ရောပြီး ချဉ်ပေါင်နဲ့ မျှစ်ဟင်းအနံ့ ကိုသတိရနေတာ။
ဟုတ်တယ် ကုိုယ့်စိတ်ကြိုက်ဆုို ပုံမှန်ကမြန်မာဆန်တဲ့ဟင်းတွေပုိုကြိုက်တယ်။
ရှမ်းစာ။ ကုလားစာ၊ ကရင်စာ၊ ကချင်စာတွေလည်းကြိုက်တယ်။ ဘုိုဆန်တာနဲ့တရုတ်ဆန်တာကတော့ သိပ်အာသီသမရှိတတ်ဘူး။ ချက်တော့ချက်စားတော့စားပါတယ်။
ကုိုယ်ကမီးမီးကုိုမြန်မာဟင်းချက်ကျွေးမယ်။ မီးမီးကကုိုယ့်ကုို ရှမ်းဟင်းချက်ကျွေးနော်။း)
မနာလိုတော့ဘူးနော်။ ချဉ်ပေါင်တွေပေါတယ်ဆုိုလို့ ။
စိတ်ကူးနဲ့ တောင်ပို့ ဘုို့ တွေးသေးတယ်။
ရုံးအားတဲ့နေ့ ကျချက်စားစန်းထွန်းရေ။ ငါးပိရည်ပါရင်တခြားဟင်းတွေတောင်သိပ်မတို့ဖြစ်ပါဘူးနော်။
စူးနှယျလေး August 16, 2013 at 12:19 PM
မြေပဲကလွဲလို့ တခုမကျန် အကြိုက်တွေချည်းပါပဲ.. အထူးသဖြင့် ချဉ်ပေါင်ပေါ့.. ချဉ်ပေါင်ဟင်းစားနိုင်တာ ကံကောင်းလိုက်တာ မမအိုင်အိုရာရယ်... အားကျတယ် တကယ် ..
Iora August 16, 2013 at 12:26 PM
ခုနကဘဲ စူးနွယ်ရဲ့ ဂရိကုိုလိုက်လည်လိုက်သေးတယ်။ စာတွေတော့ဖတ်မရတော့ပုံတွေပဲလာလာငမ်းရတယ်လေ။
ကုိုယ်လည်းအရင်ကမြေပဲမကြိုက်ဘူး။ အပြုတ်နဲ့ အကြော်ဘဲစားတယ်။ လက်ဖက်ထဲဆုိုကြော်ထားရင်စားတယ်။ အလှော်ဆုိုမစားဘူး။
အင်ဒီးယန်းဆုိုင်သွားတုန်းကရလာတာ။ အရင်တုန်းကလိုဖေါချင်းသောချင်းမစားနုိုင်တော့ဘူး စူးနွယ်လေးရေ။
Ma Tint August 16, 2013 at 7:24 PM
အိုင်အိုရာရဲ့ ဘယ်တော့ ပြင်ပြင်စုံစုံလင်လင် ထမင်းပွဲလေးကို မြင်လိုက်လို့
အရောက်လာပြီး အားပေးသွားတယ်နော် ...
Candy August 16, 2013 at 9:35 PM
စားချင်လိုက်တာ... ချဉ်ပေါင်ကြော်မစားရတာ ကြာပြီ။ ဆိုင်က ချဉ်ပေါင်ကြော်တွေစားရင် ၀မ်းလျောလို့ မစားရဲဘူး။ ချဉ်ပေါင်ရွက်ကလည်း ဒီမှာရှားတယ်။ ဟင့်..
ကန်ဒီ့အမေလည်း အဲ့လိုပဲ။ ခရီးသွားရင် အစုံလုပ်သွားတာ ကြက်ဥပြုတ်၊ လက်ဖက် :D :D
Sweet Sweet August 18, 2013 at 9:09 AM
Little Indiaမှာ ချဉ်ပေါင်လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ် ကန်ဒီသွားကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ
Iora August 16, 2013 at 10:08 PM
ခုတောင်ပြောရင်းစားချင်လာပြီ။ ဒီမှာလည်းငတ်တယ်ကန်ဒီလေးရေ။ အရင်နေရာလိုမဟုတ်ဘူး။း) အမေတွေကတော့တကယ်တော်တယ်နော်။ သူတို့ကုိုဘယ်တော့မှမမှီဘူးရယ်။
Iora August 18, 2013 at 11:44 AM
Iora August 19, 2013 at 6:09 PM
၂ယောက်ထဲနဲ. ပွဲတော်တည်လိုက်တာများ စုံတကာကိုစေ.နေတာဘဲ။
ဟင်းဟင်း ဘေဘီလေးတွေမရှိခင်တုံးတော. စိတ်ကြိုက် လုပ်ထားဦးပေါ.လေ....(မနာလိုသံနှင်.ပြောသွား)
တော်သေးတယ်၊ ဗိုက်အပြည်.စားထားပြီးတဲ.အချိန်မှ အိုင်အိုရာ.ပုံတွေကိုလာကြည်.မိလို.။ နို.မို.ဆို သေပြီဆရာ ဖြစ်သွားနိုင်တယ် ကံကောင်းချက် .....မြေပဲလေးကိုအဲ.လိုမွှေးနေအောင်ကြော်ပြီးတော. ဒို.က ထမင်းဖြူလေးနဲ.စားရတာ အရမ်းကြိုက်
Iora August 19, 2013 at 6:08 PM
ဘေဘီလေးတွေမရှိဘူး။ ဘေဘီကြီးတွေပဲရှိတယ်။ ကုိုယ်ရယ်အိမ်ဦးနတ်ရယ်ဘဲ။ ဘေဘီလေးတစ်ယောက်လောက်မွေးစားချင်နေတာ။
ကုိုယ်ကလူငယ်လိုပဲနေတတ်လို့ ငယ်တယ်ထင်နေကြတာ။ လူက " One foot is already in the grave" ဖြစ်နေပြီ။း)
မမအိုင်အိုရာရေ .. ထမင်းပွဲ ပြင်ထားလိုက်တာ စုံနေတာပဲ
ငပိရည်တို့စရာ အရမ်းကြိုက်တယ် မြေပဲလဲ ကြိုက်တယ် အခုလို အခွံနဲ့ ကြော်ထားတာပိုကြိုက်တယ်
အခေါက်ခေါက် အခါခါ ပြန်ကြည့်ပြီး မျက်စိနဲ့ အားပေးသွားပါတယ် ..း)
Iora August 19, 2013 at 6:13 PM
ငါးပိရည်ဖျော်မိရင်တုို့ စရာလေးနဲ့ မှစားချင်တာ။ ချဉ်ပေါင်ကြော်ကုိုမစားရတာကြာလှပြီဆုိုတော့တော်တော်စားလို့ ကောင်းတယ်အဲဒီနေ့ က။း)
ညီလင်းသစ် August 19, 2013 at 7:12 AM
ချဉ်ပေါင်ကြော်နဲ့ ငါးပိရည်ကျိုကနေ မျက်စိမခွာနိုင်ဘူး ဖြစ်သွားတယ်...၊း) အထူးသဖြင့် ငါးမြွေထိုးဆီပြန်နဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော် ပန်းကန်တွေထက်တောင် ပိုကြီးတဲ့ ပန်းကန်လုံးကြီးနဲ့ အထူးလှနေတဲ့ ငါးပိရည်ကျိုကို တသက်စာ မှတ်မိအောင် ကြည့်သွားခဲ့တယ် မအိုင်အိုရာ...၊း))
Iora August 19, 2013 at 6:20 PM
ပြောလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ငါးပိရည်ဖျော်တုန်းကတောင်ကုိုညီလင်းသစ်ကုိုသတိရလိုက်သေးတယ်။ ငရုတ်သီးတွေအများကြီးထဲ့ထားလို့ လေ။း)
ကညလသ ကေ သသေချာချာကိုအားပေးခံစားသွားတာဘဲ။ ငါးပိရည်တွေအများကြီးဖျော်ပြီးသွေးတွေတုိုးမှာစုိုးလို့ ရက်ဆက်မစားရဲဘူး။ ငါးခြောက်လှဲ့ စားတယ်။ ဟား..ဟား..။
စံပယ်ချို August 24, 2013 at 4:11 PM
Iora August 24, 2013 at 8:22 PM
သတိရနေတာ။ စပါယ်ပန်းပင်လေးတွေ့ လို့ ဝယ်ထားတာစပါယ်ပန်းပွင့်လေးတွေနဲ့ လေ။
အဲဒါစပါယ်ပန်းလေးတွေတွေ့ တော့ ဂျက်ကိုသတိရနေတာ။
ပိုးပိုးရဲ့ရိုက်ချက် September 15, 2013 at 10:25 PM
ဟင်းတွေအကုန်ကြိုက်တယ် စားချင်တယ် ကျန်တဲ့ဟင်းတွေလည်း ဗိုက်ဆာတိုင်း လိုက်ငမ်းမယ် များများချက် များများတင်နော်
Iora September 22, 2013 at 10:44 AM
ငမ်းပါ။ ငမ်းပါ။ ဒီလိုလာလည်မဲ့သူမျှော်နေတာ။
များများချက်တယ်။ များများတင်ချင်ပါတယ်။ များများမရေးချင်ဘူးကွယ်။